Ukubambezeleka kwenkulumo ezinganeni | Bezzia
Ukubambezeleka kwenkulumo ezinganeni
UMaria Jose Roldan | 04/06/2021 23:14 | Eyendodana yakho
Into ebi kakhulu umzali angayenza ukuqhathanisa ingane yakhe nabanye. Isihloko senkulumo ngesinye salabo abathola ukuqhathaniswa okuningi futhi ukuthi abazali abaningi abanasineke ngamazwi okuqala engane.
Ngokuphathelene nolimi, kuvela ukungabaza kwazo zonke izinhlobo, ikakhulukazi lezo ezihlobene nesikhathi lapho omncane kufanele aqale ukukhuluma futhi uma kukhona okufanele kukhathazeke uma kungakwenzi eminyakeni ethile.
1 Yonke ingane idinga isikhathi sayo
2 Kungasiphi isikhathi lapho kungaba khona inkinga enkulumweni yengane
3 Ungakukhuthaza kanjani ukukhula kolimi ezinganeni
Yonke ingane idinga isikhathi sayo
Abazali kumele bacaciswe ukuthi akuzona zonke izingane ezifanayo futhi wonke umuntu udinga isikhathi sakhe uma kuziwa ekufundeni ulimi. Kuyiqiniso ukuthi eminyakeni ethile zonke izingane kufanele zikhulume ngaphandle kwenkinga futhi uma kungenjalo, ingane ingahle ibhekane nokulibaziseka ekukhuleni kwenkulumo.
Njengomthetho ojwayelekile, ingane kufanele isho amagama ayo okuqala inonyaka owodwa ubudala. Ngezinyanga eziyi-18, ingane yakho encane kufanele ibe nesilulumagama samagama angaba yikhulu. Lapho sifinyelela eminyakeni emibili, lesi silulumagama sicebiseke kakhulu futhi ingane kufanele isivele inamagama angaphezu kwama-500 lapho ikhuluma. Lokhu kujwayelekile, yize kungaba khona izingane ezinamagama amancane futhi anamagama ambalwa.
Kungasiphi isikhathi lapho kungaba khona inkinga enkulumweni yengane
Kungase kube nokubambezeleka okuthile olimini, lapho ingane lapho ifinyelela eminyakeni emibili ingakwazi ukuxhumanisa amagama amabili. Kunezinye izimpawu ezingakuxwayisa ngezinkinga ezinkulu zolimi:
Eminyakeni emithathu ubudala ingane yenza imisindo ehlukile kepha akakwazi ukusho amagama athile.
Ayikwazi ukuxhumanisa amagama ukwakha imisho.
Ayinamandla okubiza futhi uyakwazi ukulingisa kuphela.
Kubalulekile ukukhombisa abazali ukuthi ezimweni eziningi Ukubambezeleka kuvame ukujwayelekile phakathi neminyaka.
Ungakukhuthaza kanjani ukukhula kolimi ezinganeni
Ochwepheshe kulo mkhakha bayeluleka ngokulandela uchungechunge lweziqondiso ezivumela izingane ukuthi zithuthukise ulimi lwazo ngokufanele nangokufanele:
Kuhle ukuthi abazali bafundele izingane zabo izindaba noma izincwadi ngendlela ejwayelekile.
Isho ngokuzwakalayo izenzo ezehlukene ezizokwenziwa ekhaya.
Phinda amagama ezisetshenziswa usuku nosuku.
Kungakuhle ukuthi uchithe isikhathi esithile emidlalweni yezemfundo lapho ulimi noma inkulumo inendima ebalulekile.
Ngamafuphi, isihloko senkulumo singenye yalezo ezivame ukukhathaza kakhulu abazali. Ukubona ukuthi ezinye izingane zikwazi kanjani ukusho amagama azo okuqala lapho sezineminyaka yobudala nokuthi eyakho ingane ayisho, kwenza abazali abaningi bathuke kakhulu. Khumbula ukuthi ingane ngayinye idinga isikhathi sayo, ngakho-ke kufanele ugweme ukuqhathanisa. Izingane eziningi ziyabambezeleka uma kukhulunywa ngokukhuluma, kepha eminyakeni edlule, ulimi lwabo luba yinto eyejwayelekile futhi bayakwazi ukukhuluma ngaphandle kwenkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Eyendodana yakho » Ukubambezeleka kwenkulumo ezinganeni
5 okhiye bokugcina umoya opholile kuleli hlobo
Imithombo yengadi, ukuhlobisa nokuphumula